Na Na Na Na Naa ... | Martech Zone
Tuesday, August 11, 2009 Sundaybọchị Sọnde, Ọgọstụ 23, 2009 Douglas Karr
Kedụ ka ị ga - esi gbanwee ọdịnaya gị ma ọ bụrụ na onye na - eme nchọgharị na weebụsaịtị gị nọ na mba ọzọ? Ọnọdụ dị iche? Obodo dị iche? N'okporo ámá? Na ụlọ ahịa gị? You nwere ike ịgwa ha okwu dị iche? Ị kwesịrị!
Geotargeting anọwo na nwa oge ugbu a na ụlọ ọrụ na-ere ahịa. Arụrụ m ọrụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa nchekwa data iji rụọ ọrụ na ndepụta aha nke na-eji oge mbanye na anya iji wepụta atụmanya yana ọ nwere ọganiihu. Ulo oru a amaghi otu odi nso di nkpa nye ahia ha kwa ubochi.
Mụ na ndị ahịa nwere ụlọ ahịa agbata obi na-arụkọ ọrụ mana ha nwere ọ theyụ na ha ga-ebu ụzọ tụọ aka na asọmpi nke na-ekpuchi obodo niile. Mara mma - ha ga-ekpughere a ụzọ n'ụzọ anọ nke a nde na-ebi akwukwọ nke nwere ike ọ gaghị abata n'ụlọ ahịa ha. Ọ bụrụ na ha rụsiri ọrụ ike iji mata banyere ụlọ ahịa ha na otu mile na mpaghara ọ bụla, ọ ga-eweta nlọghachi ka mma na ntinye ego.
Dị Firefox kachasị ọhụrụ na-enye n'ezie geolocation ojiji site na ihe nchọgharị. M nwalere ya ma n'eziokwu, enweghị mmasị na ya - oke ziri ezi. M na-eche ihe kpatara na ha etinyeghị aka na ya GeoIP data. Mozilla gosiri na m nọ na Chicago mgbe m bụ n'ezie South nke Indianapolis:
Eziokwu ziri ezi, nke a ka bụ nzọụkwụ na ezi ụzọ. Ọnọdụ geoaccuracy nke iPhone agbanweela ngwa mkpanaka. Obodo Google na-egosipụtakwa ụfọdụ ikike dị ịtụnanya.
Nke a ga - agbanwe web ahụ ozugbo ihe nchọgharị ọ bụla na-enye ọnọdụ gị nke ọma, n'agbanyeghị! Ọ pụtara na m nwere ike dynamically gbanwee ihe ọmụma na m website dabere na ọnọdụ gị. Ọtụtụ ndị na-eji GeoIP eme nke a ugbua, mana nnwere onwe na oge nwere ike ịgbanwe mpaghara egwu.
Ọ bụrụ na m bụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa, enwere m ike ikwu maka ndị ahịa mpaghara gị azu azu. Ọ bụrụ n’ị nọ n’azụ ụlọ m, enwere m ike ike ịgbanwe ọdịnaya m ga - ekwu maka ya obodo anyị. Ọ bụrụ n ’ịnọ n’obodo ọzọ, a ga m enye gị ozi ụlọ ọrụ mpaghara. Ọ bụrụ na ị nọ n'okporo ámá n'ebe m nọ, enwere m ike ịgbapụta pụrụ iche ozugbo iji nye gị ihe mkpali ịkwụsị.
Ọ na-aga n'ekwughị na usoro mmalite nke Ọdịnaya Nchịkwa Ọdịnaya ga-enwerịrị ike ọdịnaya nwere ike iji kwe ka nhazi nke ọdịnaya sitere na onye ọbịa ọhụrụ, onye bịara abịa, isiokwu, ịzụta akụkọ ihe mere eme, ọnọdụ, wdg, wdg. Ndị ahịa ga-anọgide na-ekwu okwu n'ụzọ doro anya dị ka o kwere mee ozugbo nye ndị na-ege ntị, na teknụzụ ndị a na-eme ka anyị gaa n'ihu.
Tags: adobeimewe ihe omumammmmmmmmmmmmmasọmpi facebookfacebook zoo atụndị m mobiledochieakuko